Iindawo zeholide eziqeshisayo eSylt
Unxweme oluhle kunye nedolophu,iflethi entofotofo kunye nefenitshala efanelekileyo kubantu abayi-2 kwindawo ezolileyo kumazantsi eWesterland. Ukuzola kwaye kufutshane nolwandle, malunga ne-100 m ukuya kwiidama, ukuwela kolwandle kukhokelela ekupheleni komzantsi we-promenade, i-15min. ukuya kwiziko Ngelishwa, inokubhukishwa kuphela ngaphandle kwezilwanyana zasekhaya. Ukhetho, i-euro eziyi-15 umntu ngamnye ifakwa kwiphakheji yokuhlamba impahla enamashiti neetawuli zebhedi.
Aarhusiikhilomitha eziyi- 182
EHamburgiikhilomitha eziyi- 186
Bremeniikhilomitha eziyi- 206
Giethoorniikhilomitha eziyi- 283
Hanoveriikhilomitha eziyi- 297
Malmöiikhilomitha eziyi- 306
EAmsterdamiikhilomitha eziyi- 362
Scheendijkiikhilomitha eziyi- 374
Utrechtiikhilomitha eziyi- 378